အန္တရာယ်များသော အင်္ဂလိပ်စကား (၃) - Myanmar Network
Posted by Tin Nyunt on February 11, 2012 at 10:32 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စကားမှာ vowel sound အနေနဲ့ ၃၃ သံရှိတယ်။ ခုမှအင်္ဂလိပ်စာကို စတင်လေ့လာသူတွေ အနေနဲ့ အသံထွက်ရတာ၊ နားရေ၀အောင်လေ့လာရတာ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂရိ၊ အီတလီ၊ ဂျပန်၊ စပိန်တွေအနေနဲ့ အခက်အခဲတွေ ကြုံနိုင်ပါတယ်။
ရေကို အပူပေးမယ် “I’m going to heat the water” လို့ပြောရမယ့်နေရာမှာ “I’m going to hit the water” ဆိုတဲ့အသံထွက်သွားရင် ရေကိုအပူပေးတာ မဟုတ်တော့ဘဲ၊ ရေကို သွားပြီး တူနဲ့ထုတာဖြစ်သွားမယ်။
အသံထွက်မှန် မမှန် စမ်းကြည့်ရအောင်
အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံကလူတွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ စကားလုံးတွေ သွားဖတ်ခိုင်းရင် ကိုယ်သိထားတာ၊ ကိုယ်အသံထွက်နေတာနဲ့ ကွာခြားတယ်ဆိုတာ သိသာလိမ့်မယ်။ အသံထွက်က တူတယ်ထင်ရပေမယ့် မတူပါဘူး။ ပြီးရင် native speaker ကို ကိုယ်ထွက်တဲ့အသံ မှန် မမှန်ပြန်နားထောင်စေသင့်တယ်။ ကဲ ဒီစာလုံးတွေကို မှန်ကန်အောင် အသံထွက်နိုင်မယ် ထင်ပါသလား။
အသံထွက်ကြည့်ရတာ အဆင်မပြေရင် သတိထားဖို့လိုမယ်။
ဥပမာ sheet ဆိုတဲ့စကား မှားသွားရင် ပြဿနာရှိတယ်။ Sheet ဆိုတာ အိပ်ရာခင်းကိုပြောတာ။ Sheet လို့ အသံထုတ်ရမယ့်နေရာမှာ shit လို့သွားထုတ်လိုက်မိရင် မစင်ဖြစ်သွားပြီး ရိုင်းပျတဲ့အသုံးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဥပမာ နည်းနည်းလောက်လိုချင်တယ် piece ဆိုတဲ့နေရာမှာ piss ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ သွားသုံးလိုက်ရင် သေးပေါက် တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
အမေရိကန်တွေအတွက်တော့ အဲဒီအသံအမှားဟာ ရယ်စရာဖြစ်သွားနိုင်သလို ကိုယ့်ကိုလည်း စိတ်ပျက်သွား စေနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်အသံမှာ /th / ဆိုတဲ့ (ø) နဲ့ (Å) အသံကို ကွဲပြားစွာထွက်ဖို့ အခက်တွေ့တတ်ပါတယ်။ အဲဒီ အသံကို သူတို့ဆီမှာလည်း ၁၃ နှစ်ကျော်လောက်မှ မှန်တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒီ အသံထွက်တွေဟာ အခြားဘာသာစကားတွေမှာ မရှိနိုင်တာကြောင့် ထွက်ဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
Phonetic နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ font တွေမရှိရင် သင်္ကေတတွေမှာ အမှားအယွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by zaw phyo naing on February 11, 2012 at 23:16
That's right. To speak, we need pronunciation, intonation and vocabulary. Thanks.
Permalink Reply by zarmanithwee on February 12, 2012 at 12:46
Permalink Reply by Mon Mon Yee on February 18, 2012 at 13:41
Permalink Reply by Master Learner on April 12, 2012 at 11:02
Permalink Reply by htaylim on August 17, 2016 at 20:14